Ikhaya / Blog / Ukufumana u-plumber kunye neengcebiso ngemibhobho yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi
2021 / 09 / 25 uhleloBlog 363 0
Umsebenzi wokufaka imibhobho yamanzi yinxalenye ebaluleke kakhulu phantse kulo naliphi na ikhaya, kwaye izinto ezinje kufuneka zifakelwe kwaye zigcinwe ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba uphepha naziphi na iingxaki ezizayo. Olu hlobo lomsebenzi kufuneka luhlale lusenziwa yikontrakta enelayisensi. Ngokwenyani oku kufunwa yimimandla kunye nemimandla eyahlukeneyo, njengoko nawuphina umsebenzi ongenamaphepha-mvume ungakhuselekanga kwaye mhlawumbi ungekho mthethweni.
Umntu ococa ngemibhobho yamanzi unoxanduva lokwenza le misebenzi ilandelayo.
-Ukufumana nokulungisa ukuvuza kwiinkqubo zerhasi nezamanzi
- Buyisela iinkqubo ezindala zokulungisa imibhobho yamanzi
-Ukufaka nokulungisa imigca yamanzi
- Lungisa imibhobho yamanzi egqabhukileyo
-Ukufaka izixhobo zokulwa ne-scald kunye neefilitha zamanzi
Iindidi zezixhobo zombhobho
Ngokubanzi, zindidi ezilishumi ezahlukeneyo zokufaka imibhobho onokuyisebenzisa, nangona ixhomekeke kwingxaki onokuthi ujongane nayo.
Iidreyini ezintsha. Oku kunokubandakanya ukulungisa idreyini evaliweyo okanye ukufaka entsha kraca.
Utywala ngokungxamisekileyo. Isetyenziselwa iimeko ezingxamisekileyo ngakumbi kwaye ziyafumaneka nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku.
Utywala ngegesi. Banceda ekuqinisekiseni ukuba ikhaya lakho okanye ishishini lakho likhuselekile ngokupheleleyo kwaye akukho bungozi kukusetyenziswa kwegesi ngokufaka iimitha zerhasi, izitovu, iivalvu kunye nabalawuli.
Ukulungiswa kwendlu yangasese. Oku ikakhulu kubandakanya ukufaka, ukugcina nokulungisa imibhobho ehambelana nokususa ilindle ekhayeni lakho.
Imijelo. Qinisekisa ukuba amanzi emvula enzima angabaleka eluphahleni ngexesha lemozulu embi.
Imibhobho eluhlaza. Oku kunceda ukugcina amanzi kwiindawo ezahlukeneyo ekhayeni lakho, kunye nokunciphisa uxinzelelo olupheleleyo kunikezelo lwamanzi oluntu. Ngenxa yoko, uya konga imali ethubeni.
Ukuphuculwa kwemibhobho yamanzi ekhaya. Oku kuluncedo ukuba uceba ukwakha okanye ukulungisa ikhaya lakho, njengoko uza kukwazi ukugcina imali kunye nokuphazamiseka ngokufaka zonke iinkqubo ezifanelekileyo zokufaka imibhobho yamanzi. 8.
Ukugcinwa kwemibhobho yamanzi. Oku kunceda ekuqinisekiseni ukuba zonke iinkqubo zokufaka imibhobho yamanzi kwikhaya lakho zisebenza ngokufanelekileyo.
Imibhobho yamanzi. Oku kubhekisa kufakelo, ugcino nolungiso lwezilinganisi kunye nemibhobho ehambisa amanzi abandayo kunye ashushu ekhayeni lakho.
Ugcino lweeNkonzo zoomatshini. Ukubonelela ngoncedo ekufakweni, ukulungiswa kunye nokugcinwa kwezinto zokufakelwa kunye nemibhobho yokufudumeza kunye neenkqubo zokupholisa kwiindawo zokuhlala nezorhwebo.
Ngaba uzifumana ufuna iinkonzo zombhobho? Qiniseka ukuba uqesha iinkonzo zokumisa ngemibhobho yamanzi ngokusekwe kuloo msebenzi uwuqeshileyo, umzekelo, ukubuyisela itepu engalunganga kulula ngemibhobho yamanzi yaselumelwaneni, kodwa ukufaka yonke inkqubo yemibhobho yamanzi kungafuna inqanaba eliphezulu loqeqesho, amava kunye nezakhono.
Intsomi yokusebenza kwemibhobho yamanzi ayinakuvunyelwana kwasekuqaleni
Awunakho ukubuqonda ubunyani bemibhobho yamanzi xa kuthelekiswa nenkonzo yemibhobho rhoqo yaseToronto. Inyani yile yokuba ubukho beentsomi zemibhobho yemibhobho yamanzi benza ukuba kubenzima kubanini bamakhaya ukwenza izigqibo ezifanelekileyo ngemibhobho yamanzi ngexesha elifanelekileyo kunye nesikhokelo esifanelekileyo. Akufuneki kuthethwe ukuba, izinto eziyinyani ngemibhobho yamanzi zibangela isiphithiphithi ekuhambeni kwexesha, emva koko, iinkonzo zombhobho zaseToronto azikho lula kwipokotho yomninikhaya. Oku kulandelayo luluhlu olungeyonyani lwezixhobo zokufakelwa kwemibhobho ezingenakuvunyelwana nazo kwasekuqaleni ukunqanda iinkonzo ezingaphezulu kwemibhobho yamanzi
Ziqhelekileyo iimpompo ezivuzayo
Uyalikhumbula ixesha lokuqala xa itompu yakho yaqalisa ukuvuza? Kuya kufuneka ucinge ngokuyiqinisa okanye ukuyijonga okwemizuzu embalwa. Emva kwexesha, waziqhelanisa nomkhwa wokuvuza ompompo. Ngapha koko, sele kuyinto eqhelekileyo kuwe ukubona itepu evuzayo. Ingxaki ephambili iza xa ityala lamanzi liqala ukunyuka kuba amanzi ahlala ephuma kumbhobho ovuzayo. Ngoku, uyabona ukuba eli bango liqikelelwa njani kwimibhobho? Ngexesha elizayo xa ubona itampu evuzayo, tsalela iingcali kwindawo ohlala kuyo uPlumbing Toronto.
Ukuqhuma kwezifudumezi zamanzi
Namhlanje, ukufudumeza amanzi kuye kwayimfuneko kuwo onke amakhaya, ngaphandle kwexesha. Enye yeenkampani eziphambili zemibhobho yaseToronto iTPG ithi, "Abathengi abaninzi bathanda ukuthandabuza ukhuseleko lwezifudumezi zamanzi kuba balunyukisiwe kwimeko yokufudumeza okufudumeza amanzi." Izifudumezi manzi azidubuli. Ewe, itanki yesifudumezi-manzi inokuqhekeka ngenxa yokungabikho kolondolozo. Nangona kunjalo, akukho nto inje ngokuqhushumba kwincwadana yemingcipheko yezifudumezi zamanzi zale mihla. Ukufakelwa kwezifudumezi zamanzi zanamhlanje kuza newaranti kunye nesiqinisekiso. Ngaphandle kwaleyo, kucetyiswa ukuba ufumane iinkonzo zokufakela kwisifakeli esinamava.
Imibhobho evuthayo ingcono kunemibhobho engacimekiyo
Imibhobho evuthayo ayinakonakala kwaye inokubangela iingxaki ekuvaleni ekuhambeni kwexesha. Kwelinye icala, imibhobho engatshiyo ihla ngokukhawuleza kwaye ibangele ukungcola okuncinci ekuhambeni kwexesha. Kuyacetyiswa ukuba uqiniseke ukuba umgangatho wombhobho ubalasele ngaphambi kokufaka imibhobho engatshiyo. Ngaphandle koku, zonke iintlobo zemibhobho zifuna ukugcinwa rhoqo, ukucocwa ngobuchule, kunye nokubuyiselwa endaweni yazo ekupheleni kobomi babo, kwaye kuyafana nakwimibhobho engatshiyo. Ke ngoko, sukukhetha imibhobho yamanzi enokugungxulwa ngaphezu kwemibhobho yamanzi engatshiyo.
Iingcebiso ngemibhobho yokunciphisa ukuSetyenziswa kwaManzi kunye nokuGcina iMali
Ukuba ikhaya lakho libonakala lisebenzisa amanzi amaninzi kunesiqhelo, kukho ithuba elihle lokuba unendawo evuzayo kwenye indawo. Oku kunokubangelwa kukungqubeka ngemibhobho okungafanelekanga okanye izixhobo zombane kunye nezinto ezingasebenzisi mandla ngendlela efanelekileyo njengoko kufanelekile. Ukuba nompayipi oqeqeshiweyo owenza uhlolo kwikhaya lakho lonke kuya kukunceda uqonde ukuba ungakanani na amanzi omoshayo.
Umntu oqeqeshelwe ukusebenza ngemibhobho yamanzi unokukunceda ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngokuchonga iindawo apho ungagcina khona amanzi.
Iibhobho zokuhamba eziphantsi
Iimpompo ezihamba kancinci ziyonyusa uxinzelelo lwamanzi aphuma ngaphandle kokunyusa inani lamanzi asetyenzisiweyo. Ukuba awufuni ukubuyisela itepu esele ifakiwe, i-plumber yakho inokongeza iifilitha ezincinci kwifom yakho esele ikhona.
Izindlu zangasese ezihamba kancinci
Ingqondo yokuhamba kancinci yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngepompo iya kunceda ukunciphisa inani lamanzi asebenzisa indlu yangasese ngokugungxula. Kuxhomekeka kuhlobo lwendlu yangasese oyithengayo, ungonga kangangoko iilitha ezintathu zamanzi okanye nangaphezulu ngokugungxula.
Jonga ukuvuza ngaphakathi nangaphandle
Jonga yonke imibhobho yakho ukuvuza ngaphakathi nangaphandle. Ungalibali ukujonga ithumbu lakho lokuhlamba. Idriphu encinci ephuma kumbhobho okanye umbhobho inokubonakala ngathi ayibalulekanga, kodwa ngokuhamba kwexesha, unokulahla amakhulu eelitha zamanzi.
Jonga iipompo / iipayipi zangaphandle
Ngelixa ujonga yonke imibhobho yakho yangaphakathi kunye neepompo, qiniseka ukuba uyaphuma ujonge iipompo kunye nemibhobho engaphandle kwendlu yakho. Jonga iphuli yakho, ibhafu eshushu, itanki yokubasa nayo.
Phinda usebenzise amanzi akho angwevu
Ngelixa ungenako ukusebenzisa amanzi amdaka ngokupheka okanye ngokuhlamba, ungawasebenzisela ukunkcenkceshela ingca yakho okanye ukuhlamba isithuthi sakho. IGreywater ngamanzi owashiya ngasemva emva kokuhlamba izitya, iimpahla okanye ukuhlamba. Ukuba ufuna ukubeka i-greywater yakho ngokufanelekileyo, tsalela umnini-plumber ukongeza inkqubo yombhobho emibini eqokelela amanzi angwevu njengoko iveliswa.
Xa ukusebenzisa kwakho amanzi kuphezulu kunokuba kufanele ukuba ube ungazi ukuba ukhangele phi okanye ujonge ntoni, tsalela umntu oqeqeshiweyo ngemibhobho yamanzi. Banokukunceda ufumane ukuvuza kwaye banokubonelela ngengcebiso ngendlela yokunciphisa inani lamanzi olusetyenziswa lusapho lwakho yonke imihla. Ukuhlolwa okukhawulezileyo okujikeleze ikhaya lakho kunokukunika iimpendulo ozifunayo kwaye kukuncede ugcine ixesha nemali.
Izizathu eziPhezulu zokubonana neKontrakta yeLayisenisi yeMibhobho
Nokuba ufuna ukucoca indawo evaliweyo evaliweyo okanye ufake izinto ezintsha zokufaka imibhobho ekhayeni lakho, kufuneka ufumane umntu oqeqeshelwe ukusebenza ngemibhobho yamanzi eNorthbrook onokubonelela ngeenkonzo zemibhobho esemgangathweni. Umsebenzi weplumber awuyonto ilula nanjengoko kubandakanya ukulungiswa kunye nokufakwa kweepompo ezahlukeneyo, iiketile, imibhobho kunye neevaluva ongenakuzenzela wedwa. Ukuqesha ikhontraktha yemibhobho yamanzi kuya kukubonelela ngeenkonzo ezikhawulezayo nezithembakeleyo kwaye olu lutyalo-mali oluxabisekileyo kuwe ngezizathu ezininzi.
Nazi ezinye zezizathu zokuqesha umntu olitywini
Ikhontrakthi eqinisekisiweyo yemibhobho yamanzi iya kukubonelela ngenkonzo ekhethekileyo ngaphandle kokubuza. Nokuba kucocwa imijelo evaliweyo, ukulungisa iipompo kunye nezivalo, okanye ukufakela izifudumezi zamanzi kunye nezinye izinto zokulungisa imibhobho yamanzi, umntu osebenza ngemibhobho yamanzi uya kuqinisekisa ukuba ufumana eyona nkonzo ifanelekileyo ngezinto ezisemgangathweni. Iingcibi zobungcali ezinokusombulula iingxaki zemibhobho yamanzi kwangoko.
Ngolwazi olubanzi kunye nezakhono, umntu oqeqeshelwe ukusebenza ngemibhobho yamanzi uya kukunceda ngokuchanekileyo kwaye uhlala ekubonelela ngeenkonzo zokufaka imibhobho yamanzi ngezixhobo ezifanelekileyo. Umntu osebenza ngemibhobho yamanzi unokuchonga unobangela wemijelo evaliweyo kunye neefompo kunye nezinye izinto ezingasebenzi kakuhle kwaye athathe amanyathelo afanelekileyo okujongana nengxaki. Awudingi kuyalela umntu osebenza ngemibhobho yamanzi eNorthbrook ngokulungiswa kwemibhobho yamanzi kuba uya kuzisombulula ngokwakhe ezi-100 zepesenti ngokuchanekileyo nangokuzithemba.
Ukuqesha umntu osebenza ngemibhobho yamanzi ngobungcali kuya kwenza ukuba ufumane iingcebiso eziluncedo ngokulungisa kunye nokugcina izixhobo zakho zokulungisa imibhobho yamanzi ngenxa yokuba umntu olungisa imibhobho yamanzi eyazi indlela yokuthintela imijelo evaliweyo nendlela yokugcina iipompo zakho, iishawari kunye neetephu ezisebenza kakuhle. Umbhobho wemibhobho yamanzi akanakunceda kuphela ekulungiseni imibhobho yamanzi, kodwa uya kukunceda ngokulondolozwa okufanelekileyo kwezixhobo zakho ukongeza ixesha lokuphila kwazo.
Ngoncedo lwekhontraktha yobungcali ngemibhobho yamanzi, ungagcina imali kuba umntu otyikitya ngemibhobho yamanzi uya kukucebisa ngokufaka izinto zokufaka imibhobho zamvanje kunye nezinto ezithile ukuze wandise ubomi kunye nokusebenza kweefompu zakho kunye nezinye izinto. Umntu otya ngemibhobho yamanzi angakucebisa ukuba ubuyisele izixhobo ezindala zokunyusa imibhobho yamanzi ezonyusa iindleko zakho, umzekelo, umntu olungisa imibhobho yamanzi unokukucebisa ukuba ubuyisele isifudumezi-manzi sakho esitsha ngendawo yokufudumeza amanzi ngcono kunye nokusetyenziswa kombane kancinci ngexesha lokufudumeza ngokukhawuleza.
Ikhontrakthi enobungcali ngemibhobho yamanzi iya kusoloko ikubonelela ngokulungiswa kwemibhobho esemgangathweni kunye nokufakwa kweemveliso ezintsha zokufaka imibhobho yamanzi, ikunika ulwaneliseko lweepesenti ezili-100 kunye noxolo lwengqondo kunye nokubuyisa ixabiso elipheleleyo kutyalo-mali lwakho. Ngeenkonzo ezinokuthenjwa zekhontraktha yobungcali ngemibhobho yemibhobho yamanzi, unokuqiniseka ukuba iingxaki zemibhobho ziya kusonjululwa ngokufanelekileyo kwaye ufumane isiqinisekiso sokulungiswa simahla kwezixhobo zakho zokulungisa imibhobho yamanzi. Umbhobho onephepha mvume uya kudibana nawe ngokubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni.
Ngaphambili :: Iingcebiso ngokugcina iiBhobho zakho zangasese zingenabala kwaye zivuza simahla next: Yenza isicwangciso sokuhombisa ngeSink yokuhlambela ngeeBhafu